Adeeg - Utien Pack Co ,. Ltd.
Utien Pack waxay bixisaa hal adeeg oo xirmo ah, oo ay ku jiraan la-tashiga baakadaha, tababarka hawlgalka, iyo xalalka tikniyoolajiyadda.
1, Wadatashi xirmo xirfad iyo xalka
Utien Pack wuxuu awood u leeyahay inuu soo bandhigo xalka baakada ku qanacsan marka loo eego dalabaadka macaamiisha dalbanaya.
Marka ay macaamiisha rafcaan ka qaataan xirmooyinka, kooxda injineerkeenu waxay dhawaan bilaabi doonaan inay falanqeeyaan, ka wada hadlaan oo naqshadeeyaan soo-jeedinta baakadka. Adoo naqshadeynaya shaqada mashiinka, qaabeynta cabirka mashiinka, iyo ku darida qalabka seddexaad ee ku haboon, waxaan u heellan nahay sameynta xalka xirxira kasta oo si fiican loogu shaqeyn karo wax soo saarka macaamiisha.
2 deb Qalabaynta mashiinka
Kahor bixinta mashiinka, Utien Pack wuxuu sameyn doonaa taxaddar si taxaddar leh isagoo hubinaya faahfaahin kasta, sida dejinta dhimayaasha, taalada qalliinka, isu imaatinnada qaybaha, calaamadaha qaybaha, iyo iwm.
3, Adeegga iibka kadib
Utien Pack wuxuu hubiyaa 12 bilood oo damaanad ah mashiinkeena, marka laga reebo qaybaha la xiran karo sida silsiladda silikoonka iyo siligga kululaynta. Markay wax dhibaato ah ku dhacdo mashiinka, waxaan ku faraxsanahay inaan ku siino hagista teknoolojiyada khadka tooska ah. Sidoo kale injineerkeena ayaa diyaar u ah inuu dibada aado mashiin rakibida, tababarka aasaasiga ah, iyo dayactirka. Faahfaahin dheeraad ah ayaa laga sii wada hadli karaa.
4 package Xidhmada Imtixaanka
Macaamiisha waa lagu soo dhaweynayaa inay alaabadooda u diraan warshaddeena si ay ugu baakadeeyaan baakadaha tijaabada ah.